Kedu Microsoft Azure | Windows Azure
Microsoft Azure ma ọ bụ Windows Azure
Microsoft Azure, oge ụfọdụ gara aga dị ka Windows Azure, Microsoft na-emeghe kesara nghazi kọmputa. Ọ na-enye ọtụtụ ọrụ igwe ojii, gụnyere ndị maka ọgụgụ, nyocha, nchekwa na ịkparịta ụka n'Ịntanet. Ndị ahịa nwere ike ịchọta ma chọgharịa ọrụ ndị a iji mepụta ngwa ngwa ọhụrụ, ma ọ bụ na-agba ọsọ ngwa, na igwe ojii nkịtị.
A na-ele Microsoft Azure anya dịka ma Platform dị ka Ọrụ (PaaS) na Ihe Akụrụngwa dịka Mgbasa Ozi (IaaS).
Microsoft na-edozi ọrụ azure na ụdị 11 isi ihe:
Na -Ọrụ ndị a na-enye igwe di iche iche, ngwugwu, nkwụsị njikere na ngwa ngwa ngwa.
Web na mobile - Ọrụ ndị a na-eme ka mmepe na ndokwa nke weebụ na ngwa ndị dị mkpirikpi, na-enyekwa akụkụ maka nchịkwa API, ịdọ aka ná ntị na ikpughe.
Data nchekwa -nke nhazi ntinye aha ya dika nchekwa Service maka SQL na NoSQL, ma tinyekwa ya na unstructured ma debekwa kesaa nchekwa.
Analytics - ọrụ ndị a na-enye nyocha na nchekwa na-ekesa, na mgbakwunye na-aga n'ihu nyocha, nnukwu nnyocha nyocha, ọdọ mmiri data, mpempe akwụkwọ igwe na data storagehousing.
IZIRỊTA - nchịkọta a na-agụnye netwọk ndị dị larịị, njikọta na ọnụ ụzọ dị iche iche, na ọrụ maka nchịkwa ọrụ, nhazi nhazi na mpaghara aha kpuchie (DNS) na-enye aka.
Mgbasa ozi na nnyefe ọdịnaya (CDN) - ọrụ ndị a na-etinye aka na arịrịọ, ngbanwe na ntanetị mgbasa ozi na ntinye aha.
Ngwakọta ngwakọ - ndị a bụ ọrụ maka nkwado nke ihe nkesa, mgbasa ozi saịtị ma na-akpakọrịta na nzuzo.
Njirimara na njikwa aka (IAM) - onyinye ndị a na-egosi na ndị ahịa nwere ike ịnweta ọrụ azure, ma nyere aka igodo nzuzo na ihe ndekọ ndị ọzọ.
Internet Ihe (IoT) - ọrụ ndị a na-enyere ndị ahịa aka, nyochaa na nyochaa data IoT site na sensọ na ngwaọrụ dị iche iche.
Njikwa na nchekwa - ihe ndị a na-enyere ndị isi ojii aka na-arụ ọrụ nzukọ azure ha, oge nhazi na ịrụ ọrụ, ma mee ka robotization. Ihe a na-eme ka ọ bụrụ ihe ọzọ na-ejikọta ikike maka ịmata ọdịiche na imeghachi ihe ize ndụ nchebe ígwé ojii.
Ọrụ zuru ezu nke ọrụ Azure na-agbanwe mgbe niile. Ndị ahịa kwesịrị ịlele saịtị Microsoft Azure maka mmeri.
N'otu aka ahụ ka ha nwere ike iji igwe ojii ndị ọzọ na-emeghe, òtù ole na ole na-eji Azure eme ihe maka nkwado data na debacle mgbake. Ọzọkwa, mkpakọrịta ole na ole na-eji Azure eme ihe dịka nhọrọ ọzọ maka data ha. Dịka itinye aka na ihe ntinye aka na sava na nchekwa, ndị a na-eme ihe ole na ole, nke azụmahịa ha na Azure.
Microsoft gosipụtara Azure na October 2008. A na-akpọkarị igwe ojii Windows Azure, mana e degharịrị ya na Microsoft Azure na April 2014. Azure na-agbazi oghere igwe ojii ndị ọzọ, gụnyere Amazon Web Services (AWS) na Google Cloud Platform.
Iji kwe nkwa inweta, Microsoft nwere Azure ebe nchekwa data dị n'ebe dị anya. Na January 2016, Microsoft kwuru na ọrụ azure nwere ike ịnweta na mpaghara 22 n'elu ụwa, na-etinye na United States, Europe, Asia, Australia na Brazil.
Hụ na SQL Server 2014 Asambodo
Nchọpụta di elu nke Microsoft Exchange Server 2013